Ọ bụ ike họrọ naanị 5 Easy Day Njem Site Milan Site Train ịkọrọ gị. Isi obodo ejiji Italytali mara mma na nhọrọ maka ndị njem nleta na-eleta. Ọ bụghị naanị na ọ na-ejupụta na ejiji, ma o nwere ihe ịrịba akụkọ ihe mere eme, ije, na mara mma to write home about.
St. Moritz na-eme ka a zuru okè isi inyocha ndịda nke of Graubünden. Ọ bụghị a mma isi n'ihi na ụbọchị njem n'akụkụ ndị ọzọ nke Switzerland, dị ka ndị ga na-ukwuu njem oge. ọ bụ, Otú ọ dị, onye nke anyị n'elu 5 Day Njem Site Milan Site Train ezie! E wezụga nightlife na obodo, ndị isi-eme ebe a bụ n'èzí. Ọ bụrụ na ị na-amasị hiking, biking, ma ọ bụ oyi egwuregwu, i nwere ike onwe gị obi ụtọ maka izu nke a pụtara region.
Gbaa ịnyịnya na funicular na ala n'elu nke obodo, ma na-a lee anya na Bergamo si ịrịba ncheta, dị ka St. Maria Maggiore Katidral na Colleoni banye n'Ụlọ Ekpere.
ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, echefula iwepụta obere oge iji ghọta ihe dị egwu gburugburu Bergamo, na ugwu nta ndinyanade mbịne maka kilomita, ahụ na-ala anya Lake Como.
The Franciacorta region awade ụfọdụ ikpọ, award-emeri mmanya n'ihi na ị na-sample, na n'etiti mara mma Italian mma.
The Franciacorta DOCG ebe a na-ugbua ka enwere banyere 3,000 hectare nke vine ekpuchi ụfọdụ ndị mara mma mara mma agbaga Rolling n'ókèala dị nnọọ n'ebe ndịda nke Lake Iseo na Italy Lombardy mpaghara. Nke a bụ n'ime agbụpụ anya nke ọtụtụ ndị ọzọ a ma ama Italian wine na mpaghara, dị ka Piedmont n'ebe ọdịda anyanwụ na Conegliano Valdobbiadene (home of super adịchaghị Prosecco) to the east.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Easy Day Njem Site Milan Site Train” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fday-trips-milan-train%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)